သင်ခန်းစာ အမှတ် (၁၄) ပညတ်တရားနှင့် ကျေးဇူးတရား (ယုံကြည်ခြင်းတရားနှင့်အကျင့်တရား)
သင်ခန်းစာ အမှတ် (၁၄)
ပညတ်တရားနှင့် ကျေးဇူးတရား (ယုံကြည်ခြင်းတရားနှင့်အကျင့်တရား)
ခရစ်ယာန်အသက်တာတွင် ယုံကြည်ခြင်းသည်လည်းကောင်း၊ အကျင့်သည်လည်းကောင်း၊ မိမိတို့သက်ဆိုင် ရာကဏ္ဍအသီးသီးရှိကြကြောင်းကို အငြင်းပွားရန်မလိုပါ။ ယုံကြည်သူသည် ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ယုံကြည်ခြင်းအား ဖြင့် ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်ရပ်သည် ထိုသူသည် မိမိကျင့်သောအကျင့်နှင့်အညီ ဆုချီးမြှင့်ခြင်းကိုခံရမည်။
အခြေခံသဘောအားဖြင့် အယူအဆနှစ်ပါးတို့သည် ရှင်းလင်းမှန်ကန်နေသည်ဟု ထင်မြင်ရသော်လည်း အကျင့်မပါဘဲ ယုံကြည်ခြင်းတစ်ပါးတည်းဖြင့်သာ ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်ရသည်ဟူသော အချက်သည် ဧ၀ံဂေလိ ဂိုဏ်းဝင်သူ အနည်းငယ်မှလွှဲ၍ ကျန်သူတို့အတွက်စိမ်းနေပါသည်။ လက်တွေ့အားဖြင့် ခရစ်ယာန်ဘာသာရေး ဂိုဏ်းက ဏကြီးများအားလုံးလိုလိုတို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရန်ယုံကြည်ခြင်း အပေါ်၌ အကျင့်တစ်စုံတစ်ခု ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာ (သို့မဟုတ်) ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာနှင့် အခြားစည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများကို လိုက်နာရန်လိုအပ်သည်ဟု ဖြည့်စွတ်လိုကြသည်။ ကယ်တင်ခြင်းရရှိရန်အတွက် အကျင့်တရားကိုထပ်ဖြည့်ခြင်းသည် အပြစ်သားအားပညတ်တရား အောက်သို့ပြန်ပို့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပညတ်တရားအောက်၌မရှိ “ကျေးဇူးတရားအောက်၌ ရှိကြောင်းသမ္မာကျမ်းစာက ဖော်ပြ ထားပါသည်။ ဤခြားနာချက်အတွက် အဖြေသည်ထင်သလောက် မလွယ်ကူကြောင်း တွေ့ရပါသည်။တမန်တော်ကြီး ရှင်ယာကုပ်သည် ဖြောင့်မတ်ရာ၌တည်စေခြင်း Justification ကိုအကျင့်အားဖြင့် ရရှိသည်ဟု သွန်သင်သကဲ့သို ထင်ရ ပါသည်။ ထို့အတူ ရှင်ပေါလုသည် ဖြောင့်မတ်ရာ၌တည်စေခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်းတပါးတည်းဖြင့်သာ ရရှိနိုင်သည်ဟု သွန်သင်သကဲ့သို့ထင်ရပါသည်။ ဤသို့ထင်ရသော ကွဲပြားမူသည် ကြီးမားလွန်းသောကြောင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမူ ခေါင်း ဆောင်ကြီးမာတင်လုသာသည် ရှင်ယာကုပ်သြ၀ါဒစာအား အခြေအမြစ်မရှိသော စာဟုပင် ညွှန်းခဲ့ပါသည်။ ဤသင်ခန်း စာ၏ပဓာနကျသော ရည်ရွယ်ချက်မှာ ပညတ်တရားနှင့်ကျေးဇူးတရား (သို့မဟုတ်) ယုံကြည်ခြင်းတရားနှင့် အကျင့် တရားတို့ပတ်သက်၍ ကျမ်းစာသည် မည်ကဲ့သို့ဖော်ပြထားကြောင်းကို ရှင်းလင်းစွာဖော်ပြရန် ပြင်ဆင်ထားပါသည်။ ထိုစကားရပ်များပေါ်လာသောအခါ သဘောပေါက်လျှက်သူတို့နှင့် သက်ဆိုင်သောနေရာနှင့်အသုံးဝင်မူတို့ကို ဝေဖန်ခွဲ ခြားနိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။
ခရစ်ယာန်ဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းခံရသောသူတို့အနက် သန်းပေါင်းများစွာတို့သည် ထာဝရကာလအတွက် မိမိတို့ ကယ်တင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ တိကျသေချာရေရာသော အဖြေမရရှိဘဲ ရှိနေကြသည်။ “သင်ကယ်တင်ခြင်းရရှိပြီလား” ဟုမေးပါက “ကျွန်ုပ်အနေဖြင့် တတ်နိုင်သမျှ အကောင်းဆုံးကျင့်ကြံ ပြုမူနေကြောင်း” ကိုသာအဖြေပေးတပ်ပါသည်။. ထိုသို့အဖြေပေးခြင်းမှာ ထာဝရကာလသွားရမည့်လမ်းနှင့် ရပ်တည်ရမည့် အခြေအနေသည်သူတို့၏ စာရိတ္တနှင့် ကုသိုလ်ကောင်းမူပြုနိုင်မူ အပ်ါရပ်တည်နေကြောင်း ထင်ရှားစေပါသည်။ သူတို့ပြုခဲ့သော ကောင်းမူတို့သည် သန့်ရှင်း တော်မူသော ဘုရားသခင်းအား ကျေနပ်မူပေးနိုင်စွမ်းရှိမရှိကို မသိနိုင်သောကြောင့် ဤကဲ့သို့တွေဝေနေခြင်းဖြစ်ပါ သည်။ အကယ်၍ သင်သည်သင်၏ ရပ်တည်မူကို သေချာရေရာစွာ သိရှိလိုပါလျှင် ယုံကြည်ခြင်းတရားနှင့် အကျင့်တ ရားတို့၏နေရာနှင့် ရည်ရွယ်ချက်တို့ကို သိထားရန်အရေးကြီးလှပါသည်။
ပညတ်တရားနှင့် ကျေးဇူးတရားအကြောင်းလည်း ရှိပါသေးသည်။ “မောရှေအားဖြင့် ပညတ်တရားကို ပေး တော်မူသော်လည်း ကျေးဇူးတရားနှင့် သစ္စာတရားကို ခရစ်တော်အားဖြင့်ပေးတော်မူ” ယုံကြည်သူသည် အကျင့်တရား မပါဘဲ ယုံကြည်ခြင်းသက်သက်ဖြင့်သာ ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ပါသလော။ ထိုသို့ဖြစ်လျှင်ပညတ်တရားကိုအဘယ် ကြောင့်ပေးတော်မူပါသနည်း။ ပညတ်တရားသည်ယုံကြည်သူ၏အသက်တာနှင့် မည်သို့ပတ်သက်၍ ယုံကြည်သူသည် မည်သို့သဘောထားရပါမည်နည်း။ ဘုရားသခင်သည် ပညတ်တရားရှိလျှက် ကျေးဇူးတရားကိုပေးသည်မှန်လျှင် ထို ပညတ်တရား၌ မည်သည့်အားနည်းခြင်း ရှိပါသနည်း။ ကျေးဇူးတရားဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။ “ကျေးဇူးတရားမှ ရွေ့လျော့သည်” ဆိုရာ၌ မည်ကဲ့သို့ဆိုလိုပါသနည်း။ ပညတ်တရားနှင် ကျေးဇူးတရားရောလျက် အတူယှဉ်တွဲနိုင်ပါ သလော။ ခရစ်ယာန်၏ အသက်တာနှင့် ကယ်တင်ခြင်းကိစ္စတွင် ကျေးဇူးတရားသည် မည်သို့ပတ်သက်ပါသနည်း။
ဤစကားရပ်များကို နားလည်နိုင်ရန် ဤသင်ခန်းစာသည် အရေးကြီးလှပါသည်။ သင်၏ကယ်တင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ချမူရရှိနိုင်ရန်နှင့် ခရစ်တော်၌ သင်ရရှိသောကယ်တင်ခြင်း၏ အထူးပြည့်စုံနေမူကို သိရှိနိုင်ရန် ဤစကားရပ်များကို နားလည်ဘို့အထူးလိုအပ်လှပါသည်။
၁။ ဖြောင့်မတ်ရာ၌ တည်စေခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုနှင့် ရှင်ယာကုပ်တို့ ခြားနားသည်ဟု ယူဆရသောအချက်များ။
(က) ရောမ ၄း၂-၅။ ဧ ၂း၈-၉။ တိ ၃း၅-၆။ ရော ၈း၁ တို့ကိုဖတ်ရှုလေ့လာပါ။
(ခ) ယာကုပ် ၂း၁၄-၂၆ ကိုဖတ်ရှုလေ့လာပါ။
(ဂ) သာမန် အပေါ်ယံလေ့လာခြင်းဖြင့် အောက်ပါအတိုင်းပြောနေသကဲ့သို့ ရှိပါသည်။
(၁) ယာကုပ် - ယုံကြည်ခြင်းတစ်ပါးတည်းသည် သင်ကိုကယ်တင်ခြင်း မပေးနိုင်။
(၂) ပေါလု - ယုံကြည်ခြင်း တစ်ပါးတည်းကသာ ကယ်တင်ခြင်းပေးနိုင်၍ သင့်ကိုလည်း ကယ်တင် ခြင်းပေးသည်။သို့ရာတွင် (၁) ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်လျှက်ရှိသော မုဆိုးမတို့ကို ချီးကျူးထား ပါသည်။ (၂) ယုံကြည်သူတို့သည် ကောင်းသောအကျင့်၌ ကြွယ်ဝပြည့်စုံခြင်း ရှိမည့်အကြောင်း တိမောသေကို တိုက်တွန်းထားပါသည်။ (၁ တိ ၆း၁၈ ) ။ (၃) တိတုအားလည်း “ဘုရားသခင်ကိုသိ ယောင်ဆောင်သောလည်း အကျင့်အားဖြင့် ဘုရားသခင်းကို ငြင်းပယ်သောသူ” ရှိကြောင်းစာရေး ထားပါသည်။ တိ ၁း၁၆။
ရှင်ယာကုပ်က အသီးမသီးသော အချည်းနှီးဖြစ်သော ယုံကြည်ခြင်းကို လုပ်စားသောသူတို့နှင့် ပတ်သက်၍ အကျင့်မပြနိုင်လျှင် ယုံကြည်ခြင်းအစစ်အမှန် မရှိကြောင်းရေးသားပါသည်။ အကျင့်နှင့် ကင်းသောယုံကြည်ခြင်းသည် အသေဖြစ်၏။ ၂း၁၈ တွင် “ငါမူကား အကျင့်အားဖြင့် ငါ၏ယုံ ကြည်ခြင်း၏ အသီးအပွင့်ဖြစ်လျှက် လူ၏ဖြောင့်မတ်ရာ၌ တည်စေခြင်းအဖြစ်ကို ထိုနှစ်ပါးတို့သည် လက်တွဲသက်သေပြသည်ဟု ခံယူထားပါသည်။ “အသက်တာတွင် ကျေးဇူးတရား၏ လက္ခဏာမရှိ လျှင် စိတ်နှလုံးထဲတွင်လည်း ကျေးဇူးတရား၏ လက္ခဏာမတွေ့ရ”ဟု Dr. Harry Ironside က ရေးထားပါသည်။
ပေါလုသည် ဘုရားသခင်၏ရပ်တည်ချက်မှ ကယ်တင်ခြင်းကိုရှုမြင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မိမိဆန္ဒအတိုင်း ဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့်ရှိသော ဘုရားသခင်သည် ဘုရားတရားမရှိသောသူအပေါ်သူ၏ ယုံကြည်ခြင်း တစ်ခုကိုအခြေပြုလျှက် ဖြောင့်မတ်ခြင်းဝတ်လုံကို ၀တ်စေခြင်း၊ ဖြောင့်မတ်ရာ၌ တည်စေခြင်းကို ဖော်ပြသည်။ ရော ၃း၂၁၊ ၂၂၊ ၂၅-၂၈။ ၄-၅၊ ၆။ ၅း၁။
ရှင်ယာကုပ်သည် လူ၏တာဝန်ကိုဖော်ပြလျက် မိမိ၏ယုံကြည်ခြင်းကို သူတစ်ပါးတို့အား မိမိအကျင့် အားဖြင့် ဖော်ပြရမည့်တာဝန်ကို ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လူဘက်ကမြင်သကဲ့သို့သောအမြင်ဖြင့် ရေးသားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ယာ ၁း၁၈-၂၆။ ပေါလုသည် ဘုရားသခင်၏အမြင်ဖြင့် ရေးသားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ယာကုပ်သည် ဖြောင့်မတ်ရာ၌ တည်စေခြင်းကို လူ၏အမြင်အတိုင်းရေးခြင်းဖြစ်ပါ သည်။
“ယုံကြည်ခြင်းသည် ထိုသူကိုမဖြောင့်မတ်စေလျှင် မည်သူတစ်စုံတစ်ဦးမှ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဖြောင့်မတ်ရာသို့မရောက်ဟု Dr. A.T Robertson ကရေးပါသည်။
၃။ အကျင့်တရား - ကယ်တင်ခြင်း။
(က) ကယ်တင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အကျင့်တရား၏နေရာ။
(၁) ရော၊ ၄း၅-၆။ “ဘုရားသခင်သည် အကျင့်ကိုမထောက်ဘဲလျက်ပေးတော်မူသော ဖြောင့်မတ်ခြင်း”
(၂) ဧ၊ ၂း၈-၉ “ကိုယ့်ကုသိုလ်ကြောင့် ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြသည် မဟုတ် သို့ဖြစ်၍ အဘယ်သူမျှဝါကြွားစရာအခွင့်မရှိ။
(၃) ဂလ၊ ၂း၁၆။ “ပညတ်တရား၏ အကျင့်အားဖြင့် အဘယ်သူမျှဖြောင့်မတ်ရာသို့ မရောက်နိုင်ရာ”
(၄) ဂလ၊ ၂း၂၁။ “ပညတ်တရားကိုအမှီပြု၍ ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်နိုင်လျှင် ခရစ်တော်သည် အချည်းအနှီးအသေခံတော်မမူ”
(၅) ရော ၁၁း၆။ “ကျေးဇူးအားဖြင့်ရှိလျှင် ကိုယ်ကျင့်သောအကျင့်အားဖြင့် မရှိ”
(၆) တိ၊ ၃း၅-၆။ “ငါတို့ကျင့်သော ဖြောင့်မတ်ခြင်းအကျင့်အားဖြင့် မဟုတ်ဘဲ။”
ရှင်ယာကုပ်က စာရေးရာတွင်ထားရှိသော စိတ်သဘောထားကို ဖော်ပြထားပြီးဖြစ်၍၊ ကယ်တင်ခြင်း နှင့် ပတ်သက်၍အကျင့်တရားပါဝင်ခြင်းမရှိကြောင်းကို ဤကျမ်းချက်များက ရှင်းလင်းစွာဖော်ပြထား ပါသည်။ သို့ရာတွင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ပြီးဖြစ်၍ “ကောင်းသောအကျင့်၌ ကြွယ်ဝပြည့်စုံ”ရ မည်ဖြစ်ပါသည်။
၁တိ ၆း၁၈။ ကောင်းသောအကျင့်တို့ကိုအမြဲကျင့်အံ့သောငှာ သတိပြုရကြမည်။ တိ ၃၊ ၈။
(ခ) ကယ်တင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ယုံကြည်ခြင်း၏နေရာ၊ ယုံကြည်ခြင်းသည် ကယ်တင်ခြင်း၏ သော့ဖြစ်သည်။
(၁) ဧ၊ ၂း၈။ “ယုံကြည်သောအားဖြင့် ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏။”
(၂) ရော ၅း၁။ “ငါတို့သည် ယုံကြည်ခြင်းရှိ၍ ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်လျှင်”
(၃) တ၊ ၁၆း၃၁။ “ယုံကြည်လော့ … ယုံကြည်လျှင် ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်”
(၄) ရော ၁း၁၆။ “ဧ၀ံဂေလိတရား … ယုံကြည်သမျှသောသူတို့ကို ကယ်တင်စေသော ဘုရား သခင်၏တန်ခိုးတော်ဖြစ်၏။”
(၅) ဧ ၃း၁၇။ “ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ခရစ်တော်သည် သင်တို့စိတ်နှလုံးထဲ၌ ကျိန်းဝပ်တော်မူ မည်”
(၆) ရော ၃း၂၈။ “လူမည်သည်ကား ပညတ်တရား၏ အကျင့်မရှိဘဲ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်တတ်သည်။
(၇) ဖိ ၃း၁၁။ “ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ရသော ဖြောင့်မတ်ခြင်း။”ရိုးရိုးပြောရလျှင် သင်နှင့်ကျွန်ုပ်သည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ကယ်တင်ခြင်း သို့ရောက်ရပါသည်။ အခြားဘာမျှပါဝင်ခြင်းမရှိပါ။
၄။ ခရစ်ယာန်အသက်တာနှင့် အကျင့်တရားဆက်စပ်မှု။
(က) ကောင်းသောအကျင့်များသည် စစ်မှန်သောယုံကြည်ခြင်းရှိကြောင်း အထောက်အထား ဖြစ်ပါသည်။ ယာ ၂း၁၄၊ ၁၇၊ ၂၀၊ ၂၂။
(ခ) သခင်ယေရှု၏ တရားပလ္လင်တော်ရှေ့တွင် ခရစ်ယာန်တိုင်းအား ကိုယ် ခန္ဓာအား ဖြင့် လည်းကောင်း၊ ကိုယ်ခန္ဓာ၌လည်းကောင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သမျှအတွက် စီရင်ခြင်း ခံကြရမည်။
(ဂ) ကယ်တင်ခြင်းရရှိရန် ယုံကြည်သောအားဖြင့် ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဖြစ်သော်လည်း ကောင်းကင်၌ဆုပေးသောအခါ လုပ်ဆောင်ခဲ့သောအလုပ်ပေါ်တွင်မူတည်လျက် ဆုပေး မည် ဖြစ်ပါသည်။ ၁ကော ၃း၁၂-၁၅။
(ဃ) ဂလာတိ ၅း၆ တွင် မေတ္တာအားဖြင့် ဖြစ်ပွားသော ယုံကြည်ခြင်းကို ဖော်ပြထားပါသည်။ ယုံကြည်ခြင်းကို မေတ္တာအားဖြင့် လက်တွေ့ဖော်ပြနိုင်ပါသည်။
(င) ဗျာ ၁၄း၁၃တွင် သေလွန်ပြီးသော သန့်ရှင်းသူတို့အကြောင်းကိုဖော်ပြရာ၌ “သူတို့အကျင့် တို့သည် သူတို့နှင့်အတူလိုက်ကြ၏ဟု ဆိုပါသည်။ လောကတွင် သင်ရရှိထားသော ပစ္စည်းဥစ္စာများ သင်၏ကျော်ဇောမှုများကို ကောင်းကင်သို့ယူဆောင်မသွားနိုင် သင်၏ အကျင့်ကိုသာယူဆောင်နိုင်ပါသည်။ ၌လောကတွင် သင်၏ပြုကျင့်ခြင်းများသည် ထိုအရပ် တိုင်အောင်ထိရောက်မှုရှိနေပါသည်။
၅။ ခရစ်ယာန်အသက်တာနှင့် ယုံကြည်ခြင်းဆက်စပ်မှု။
(က) ကျွန်ုပ်တို့သည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သာ ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ရသည်မဟုတ် ဘဲကျွန်ုပ်တို့အား “ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏တန်ခိုးတော်သည် စောင့်ရှောက် တော်မူပါသည်” ၁ပေ ၁း၅။
(ခ) ဂလာတိ ၂း၂၀ တွင်ပေါလုက “ယခုငါရှင်သောအသက်သည် ဘုရားသခင်၏သားတော်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်တည်၏”။
(ဂ) ၂ကော ၅း၇တွင် “မျက်မြင်အားဖြင့်မဟုတ်ဘဲ ယုံကြည်မျှော်လင့်ခြင်းရှိသည့်အတိုင်း ငါတို့ သည်ကျင့်ဆောင်ပြုမူသည်”
(ဃ) ခရစ်ယာန်အသက်တာသည် ယုံကြည်ခြင်းဎပ တည်သောအသက်တာဖြစ်ပါသည်။ ၀ိညာဉ်ရေးရာတွေ့ကြုံခံစားမှုအားလုံး၏ သော့ချက်သည် ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
(၁) ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် လောကနှင့်တကွ လောက၌ရှိသော ပျော်ရွှင်မှု၊ သွေးဆောင်မှုနှင့် စုံစမ်းခြင်းအမျိုးမျိုးတို့ကို အောင်မြင်ကြရပါသည်။ ၁ယော ၅း၎။
(၂) ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်စာတန်နှင့်တကွ စာတန်၏ တန်ခိုးများ၊ စာတန် ပစ်ခတ် သောမီးစက်လက်နက်များကို အောင်နိုင်ကြ၏။ ၁ပေ ၅း၉။ ဧ၊ ၆း၁၆။
(၃) ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အမွေစားအမွေခံဖြစ်လျက်ဆက်လက်ရှင်သန်သော ဘုရား သခင်၏ ကတိတော်များကို ရယူခံစားကြရပါသည်။ ဟေ ၆း၁၂။
(၄) ထို့ထက်မကယုံကြည်ခြင်းသည် -
(က) လောကပစ္စည်းဥစ္စာလိုအပ်ချက်များအတွက် ပူပန်ခြင်းမှ ကင်းလွတ်စေ ပါသည်။ မ၊ ၆း၃၀-၃၃။
(ခ) အသက်တာ၏ မုန်တိုင်းကြီးများကို ရင်ဆိုင်ရဲသော သတ္တိကိုရရှိစေပါ သည်။ မ၊ ၈း၂၆။
(ဂ) ပူပန်ခြင်း၊ ဒွိဟဖြစ်လျက်မရှင်းမလင်းဖြစ်သော မဝေခွဲတတ်မှုများ၏ အထက်တွင် ရပ်တည်သက်ရှင်ခွင့်ရရှိစေပါသည်။ မ၊ ၁၄း၃၁-၃၂။
၆။ မိမိကျင့်သောအကျင့်အားဖြင့်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ ရောက်နိုင်သည်ဟု ယုံကြည်ခြင်းသည် ပညတ်တရား၏ လက်အောက်သို့ ပြန်ဝင်ခြင်းဖြစ်၍ “ကျေးဇူးတရား၌မတည်၊ ရွှေ့လျှော့သူ” ဖြစ်စေပါသည်။
(က) ကလာတိ ၅း၁-၆ကိုဖတ်ပါ။ အငယ် (၁)တွင် ပေါလုက ဤသို့တိုက်တွန်းထားပါသည်။ “ခရစ်တော် သည် ငါတို့ကို လွှတ်တော်မူသော လွှတ်ခြင်းအခွင့်၌တည်”ရန်။ အခြေခံအဓိပ္ပါယ်မှာ၊ မောရှေ၏ ပညတ်တရားအောက်တွင် ကျွန်ခံလျက်ချည်နှောင် ခြင်းခံရသော ဘ၀မှ ခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့ အားလွတ်မြောက်စေခြင်းဖြစ်သည်။
အငယ် ၂-၄ တွင် ပေါလုသည် အရေဖျားလှီးခြင်းအကြောင်းကို ဆွေးနွေးထားပါသည်။ ထိုအရေဖျား လှီးခြင်းသည် ပညတ်တရားအောက်တွင်ယုဒလူစစ်စစ်ဖြစ်ခြင်း၊ သီးသန့်ဖြစ်ခြင်းလက္ခဏာဖြစ်သည်။ အချို့သော အတုအယောင်ဆရာများသည် ကျေးဇူးတရားအောက်၌ပင်လျှင် ယုဒလူဖြစ်စေ၊ တစ်ပါး အမျိုးသားဖြစ်စေ ခရစ်ယာန်မှန်သော်လည်း ဓလေ့ထုံးစံအောက်ပြန်ဝင်ရမည်ဟု သွန်သင်ထားပါ သည်။ ဤအရာနှင့် ပတ်သက်၍ ပေါလုက အချက် (၃)ချက်ဖြင့် ငြင်းဆိုထားပါသည်။ အကယ်၍ ဘိုးဘေးတို့ကျင့်သုံးသော ပညတ်တရားထုံးတမ်းအတိုင်း ကျင့်လျှင် အောက်ပါအဖြေများကို ဖြစ်ပေါ် စေသည်-
(၁) ခရစ်တော်သည် သင်တို့၌ မည်သည့်အကျိုးအမြတ်ကိုမျှမပေး အငယ်-၂။
(၂) သင်တို့သည် မိမိကိုယ်မိမိပညတ်တရားကိုအကြွင်းမဲ့ကျင့်အံ့သောငှာ ကြွေးတင်သောသူ ဖြစ်စေသည်။ အငယ်-၃။ ယာ၊ ၂း၁၀။ ဂလ။ ၃း၁၀။
(၃) သင်သည် ကျေးဇူးတရား၌မတည်၊ ရွှေ့လျော့ပြီ။ အငယ် ၄
မှတ်ချက်။ “ကျေးဇူးတရား၌မတည်၊ ရွှေ့လျော့ပြီ”ဟူသော ကျမ်းစကားကဲ့သို့အခြားသော ကျမ်းစကားများကို လွှဲမှားစွာအနက်ဖွင့်ခြင်းမရှိပါ။ သင်၏ကယ်တင်ခြင်းလက်လွှတ်ရပြီဟု အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်လေ့ရှိပါသည်။ သင်သည် အရေဖျားလှီးခြင်းကိုခံယူခြင်းဖြင့် မိမိကိုမိမိပညတ်တရား၏ လက်အောက်သို့ပြန်ဝင်လျှင် သင်သည် ကျေးဇူးတရား၏ အနှစ်သာရကိုပေါ့ပါးပျက်ပြားစေပြီး။ ကယ်တင်ခြင်းရရှိစေသော လမ်းကြောင်းကိုလည်း လွှဲမှားလေပြီဟု ပေါလုက ကျွန်ုတို့အား ဆိုလို ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
(ခ) ထို့ကြောင့် ဤအကြောင်းအရာသည် ခရစ်ယာန်၏အသက်တာနှင့် ကယ်တင်ခြင်းတွင် ပညတ် တရားနှင့် ကျေးဇူးတရားအကြောင်းကို လေ့လာရန်လိုအပ်စေပါသည်။
၇။ အလေးထားရန်ကျမ်းချက် (၂)ချက်။
(က) ယော ၁း၁၇။ “အကြောင်းမူကား ပညတ်တရားတော်ကို မောရှေလက်တွင် ပေးတော်မူ၏။ ကျေးဇူး တရားနှင့် သစ္စာတရားမူကား ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဖြစ်သတည်း” ခရစ်တော်သည် အသစ်သော စနစ်နှင့် အသစ်သောကာလကိုယူဆောင်လာပါသည်။ ခေတ်ကာလကိုအုပ်စိုးလျက် လမ်းညွှန်နေ သောမောရှေ၏ပညတ်တရားသည် ကိုယ်တော်၌ အလျင်အမြန်ချုပ်ငြိမ်း၍ စနစ်သစ်ပေါ်ပေါက်လာ ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
(ခ) ရော၊ ၁၀း၎။ ယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည် ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်မည့်အကြောင်း ပညတ် တရားသည် ခရစ်တော်အားဖြင့် စုံလင်ခြင်း (စာရင်းပိတ်ခြင်း)ရှိ၏။ ပညတ်တရားသည် ဘုရားသခင် ၏ အလိုတော်ကိုဖော်ပြသည်မှန်သော်လည်း ထိုတရားသည် မည်သူ့ကိုမျှ ဖြောင့်မတ်စေခြင်းငှာ မတတ်နိုင်။ ရော ၈း၃။ ယခုယုံကြည်သူတို့ရရှိနိုင်သော ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည်၊ ပညတ်တရားနှင့် မစပ် ဆိုင်သော ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း (ရော၊ ၃း၂၁)ဖြစ်ပါသည်။ ခရစ်တော်အားဖြင့် ခရစ်တော် ၌ ယုံကြည်သူအပေါင်းတို့အဘို့အားပေးတော်မူသော ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ရော၊ ၃း၂၂၊ ဖိ ၃း၉။
၈။ ပညတ်တရားကို အကျဉ်းချုပ်လေ့လာခြင်း။
(က) ပညတ်တရားဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
(၁) ပညတ်တရား၏ စောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းသော ကာလအပိုင်းအခြားသည် မောရှေအား ပညတ် တရားကိုပေးသောနေ့မှ ခရစ်တော်တိုင်အောင်ဖြစ်ပါသည်။
မှတ်ချက်။ ဂလာတိ ၃း၂၄တွင် “ပညတ်တရားသည် ခရစ်တော်မလာမီတိုင်အောင် ကိန်းရသော အထိန်းဖြစ်သည်။
(၂) ဘုရားသခင်သည် မောရှေအား လူနှင့် ဆက်ဆံမှုအတွက် ပေးထားသော အရာများတွင် အပိုင်း (၃)ပိုင်းရှိပါသည်-
(က) ပညတ်တော်များ၊ ထွက် ၂၀း၁-၂၆။
(ခ) စီရင်ချက်များ၊ ထွက် ၂၁း၁-၂၄း၁၁။
(ဂ) အထုံးအဖွဲ့များ၊ ထွက် ၂၄း၁၂-၃၁-၁၈။
ပညတ်တော်များသည် ဘုရားသခင်၏ သန့်ရှင်းသောအလိုတော်ကိုဖော်ပြပါသည်။ စီရင်ချက်များ သည် ဣသရေလလူမျိုးတို့၏ လူမှုဆက်ဆံရေးကို အုပ်ချုပ်ပါသည်။ အထုံူးအဖွဲ့များသည် ဣသရေလ လူတို့၏ ဘာသာရေးကိစ္စများကို ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။
(၃) သာမန်အားဖြင့် ခရစ်တော်သည်ဖြစ်စေ၊ တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကဖြစ်စေ ပညတ်တရား ဟုပြောသောအခါ ပညတ်တော် (၁၀)ပါးကို ရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။
မ၊ ၅း၁၇၊ ၁၉း၁၇။ ၂၂း၃၇-၄၀။ ဂလ ၃း၁၀-၂၄စသည်။
(ခ) မည်သည့်အတွက်နည်း။ ဂလ ၃း၁၉-၂၄ကိုဖတ်ပါ။
(၁) ဒုစရိုက်များကြောင့် ထိုတရားကိုထပ်၍ ပေးတော်မူ၏ ၃း၁၉။
အပြစ်သည် ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်ကိုဆန့်ကျင်ငြင်းဆန်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပေါ်လွင် စေရန် ပညတ်များကိုပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ရော ၇း၇။ “ပညတ်တရားအားဖြင့်သာအပြစ်သဘောကို ငါသိရ၏” ၁ယော ၃း၎။ ၁တိ ၁း၉၊ ၁၀ တို့ကို ယှဉ်ကြည့်ပါ။
(၂) လောကီသားအားလုံးအပြစ်ရှိကြောင်း ဖော်ပြနိုင်ရန် ပညတ်တရားကိုပေးပါသည်။ ရော ၃း၁၉။ အပြစ်ရှိလျင် အပြစ်အတွက် ဒါဏ်ရှိကြောင်း ဖော်ပြလို၍ ပညတ်တရားကို ပေးပါ သည်။ ဂလ၊ ၃း၂၂။ ရော၃း၉-၂၀။
(၃) ခရစ်တော်မလာမီတိုင်အောင် အုပ်ထိန်းသူအဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်သည်။ ဂလ ၃း၂၄ ဂရိလူမျိုးများနှင့် ရောမလူမျိုးမိသားစုများမှာ မိမိတို့၏သားသမီးများအား ကြီးပြင်းလာ သည်အထိ အထိန်းတော်လက်ထဲတွင် အပ်ထားပါသည်။ ဖခင်သည် မိမိစည်းစိမ် ချမ်းသာ ကို အမွေခံနိုင်ရန် ရင့် ကျက်မှုရှိသည်ဟု ယူဆဆုံးဖြတ်သည်အထိ ထိုအထိန်းတော် လက်ထဲ၌ ထားပါသည်။ ဂလ၊ ၃း၂၅။ ၄း၁-၇။ ခရစ်တော်မလာမီတိုင်အောင် ခပ်သိမ်း သော အရာတို့သည် အထိန်းတော်တည်းဟူသော ပညတ်တရားလက်တွင်ရှိကြပါသည်။ ခရစ်တော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် တော်လျက် ပညတ်တရား ၏ လက်တွင်မရှိ ရော ၆း၁၄ ကိုကြည့်ပါ။
(၄) ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိကိုမိမိပြည့်စုံခြင်းမရှိကြောင်း ပေါ်လွင်စေရန်၊ ပညတ်တရားကိုပေး တော်မူသည်။ ရော၊ ၁၀း၂-၄။ ဖိ ၃း၉။
(ဂ) ပညတ်တရား၏ အားနည်းချက်များ။
(၁) မည်သူ့ကိုမျှဖြောင့်မတ်ရာ၌ မတည်စေနိုင်။ ဂလ ၂း၁၆။ တ၊ ၁၃း၃၉။
(၂) မည်သူ့ကိုမျှ သန့်ရှင်းခြင်းသို့မရောက်စေနိုင်။ ဂလ ၃း၂-၃။
(၃) ပညတ်တရားသည် ကျွန်ုပ်တို့၌ဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြစ်ပွားစေခြင်းငှာ မတတ်နိုင်။
ဂလ၊ ၃း၂၁။ ၂း၂၁။
(၄) ဇာတိပကတိကြောင့် ပညတ်တရားသည်အားနည်း၍ မတတ်နိုင်။ ရော ၈း၃။
(၅) ပညတ်တရားသည် အပြစ်တင်သောအမှုကိုသာပြုလုပ်နိုင်သည်။ ရော ၃း၁၉။
(၆) ပညတ်တရားသည် အဘယ်သူကိုမျှ စုံလင်ခြင်းသို့မပို့နိုင်။ ဟေဗြဲ ၇း၁၈၊ ၁၉။
(ဃ) ပညတ်တရားသည် မည်သည့်အရာများကိုပြုပါသနည်း။
(၁) မျက်ကန်း၊ တစ်ဘက်စွန်းရောက်ဘာသာကိုဖြစ်စေပါသည်။ ဂလ၊ ၁း၁၃-၁၄။
(၂) လူတိုင်းတို့အား ကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာသက်ရောက်စေသည်။ ဂလ ၃း၁၀။
(၃) လူတိုင်းအား အပြစ်ရှိသူဖြစ်ကြောင်း ဖေါ်ပြသည်။ ရော၊ ၃း၁၉။ ယာ၊ ၂း၁၀။
(၄) ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကို ဖေါ်ပြလျက် လိုအပ်နေမှုများကို ပြပြီး ခရစ်တော် အတွက် ပြင်ဆင် ပေး ပါသည်။ ဂလာ၊ ၄း၂၄-၂၅။
(၅) ပညတ်တရားမှ ရွေးသောသူတို့အတွက် ခရစ်တော်အသေခံခြင်းကို အချည်းနှီးဖြစ်စေသည်။ ဂလာ၊ ၂း၂၁။ ၃း၂၁-၂၂။ ၅း၃-၄။
(၆) ဇာတိပကတိ၏အသွေးအဆင်းကို အမှီပြု၍ ၀ါကြွားစရာဖြစ်အောင် သွေးဆောင်စေပါသည်။ ဂလာ၊ ၆း၁၃။
(င) ယုံကြည်သူနှင့် ပညတ်တရား မည်သို့ဆက်စပ်ပါသနည်း။
(၁) ပညတ်တရားသည်ကယ်တင်ခြင်းကိုမပေးနိုင်ဟု သိရသော်လည်း ပညတ်တရားသည် “သန့်ရှင်း၏။ဖြောင့်မတ်၏။ ကောင်းမြတ်၏။” ရော၊ ၇း၁၂။
(၂) ပညတ်တရားသည် ဆိုးညစ်သောအရာမဟုတ်ကြောင်း သတိပြုရပါမည်။ ခရစ်တော်သည် ပညတ်တရားကို ပယ်ဖျက်ခြင်းငှါမလာ၊ ပြည့်စုံစေခြင်းငှာကြွလာတော်မူ၏။ မ၊ ၅း၁၇။ ခရစ်တော် သည် ပညတ်တရားကို လုံးဝနာခံခဲ့သည်။ ယော၊ ၈း၄၆။ ၁ပေ၊ ၂း၂၁။ ကျွန်ုပ်တို့သည် လည်း ပညတ်တရားတော်သည် စုံလင်သည်၊ ဟုတ်မှန်သည်၊ ဖြောင့်မတ်သည်၊ စင်ကြယ်သည်နှင့် အညီ ရိုသေ ရ မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆာ၊ ၁၉း၇-၈။
(၃) ယုံကြည်သူသည် ပညတ်တရား၏လက်အောက်တွင်မရှိ။ ပညတ်တရား၏သွန်သင်မှု၊ နည်းပေး လမ်းပြမှု၊ အပြစ်ဒဏ်စီရင်မှုတို့နှင့်သက်ဆိုင်မှုမရှိပါ။ ရော၊ ၆း၁၄။ ၁၀း၎။ သို့သော် ပညတ်တရား သည် တရားတော်မူသော ဘုရားသခင်၏တရားစီရင်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့ အသက်တာ၌ရှိသော အပြစ် များ အပေါ် ဘုရားသခင်ထားရှိသော အလိုတော်တို့ကို ဖေါ်ပြနေဆဲပင်ဖြစ်ပါသည်။ ရော၊ ၇း၇။
(၄) ယုံကြည်သောသူ အပေါင်းတို့သည် ဖြောင့်မတ်ရာသို့ ရောက်မည် အကြောင်း၊ ပညတ်တရား သည် ခရစ်တော်အားဖြင့် စုံလင်ခြင်းရှိ၏။(ရော၊ ၁၀း၎)။ ခရစ်တော်သည် ပညတ်တရား၏ နောက်ဆုံး စာမျက်နှာဖြစ်သည်။ ယုံကြည်သူ၏တောင့်တခြင်း ဆန္ဒအပြည့်အစုံသည် ‘ထိုသခင်၌” ပြည့်စုံပြီး ဖြစ် ပါသည်။ ဖိ၊ ၃း၁၁။
(၁) ဘုရားသခင်သည် မည်သို့သောအရာဖြစ်သည်ကို ဖေါ်ပြသောအရာသည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ဖြစ်ပါ သည်။ ၁ယော၊ ၄း၈,၁၆။ ကျေးဇူးတော်သည် အတိုင်းအဆမရှိ ကြီးမားသော ဘုရားသခင်၏ မေတ္တာတော် အိုင်ထဲမှ စဉ်ဆက်မပြတ် စီးဆင်းလာသော ဘုရားသခင်၏မေတ္တာတော်ဖြစ်ပါသည်။ ယေရှုခရစ်အားဖြင့် အဘိုးကိုမပေးဘဲ အခမဲ့ပေးတော်မူသော ဘုရားသခင်၏ကယ်တင်ခြင်းနှင့် လူတို့၏လိုအပ်ချက်အလုံးစုံတို့ကို အတိုင်းအဆမရှိ ကြွယ်ဝစွာပေးနေသော ဘုရားသခင်၏ လျှံ လျက်ရှိသော မေတ္တာပင်ဖြစ်ပါသည်။
(၂) “ကျေးဇူးတရားသည် ဘုရားသခင်၏စေတနာတော်နှင့်လူတို့ကိုချစ်တော်မူသော မေတ္တာ” ဖြစ်သည်။ တိ၊ ၃း၎-၅။
(၃) “ပညတ်တရားတော်ကို မောရှေလက်တွင်ပေးတော်မူ၏။ ကျေးဇူး တရားနှင့်သစ္စာတရားမူကား ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ဖြစ်သတည်း။” ယော၊ ၁း၁၇။
(၄) ကျေးဇူးတရားကိုပေးတော်မူသောကာလသည် သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက် ခြင်း၊ ပင်တေကုတ္တေပွဲနေ့မှသည် အသင်းတော်ကို သိမ်းဆည်းသော နေ့အထိဖြစ်ပါသည်။ ဧ၊ ၃း၂-၁၀။ ၂သက် ၂း၂-၁၂။
(ခ) ကျေးဇူးတရားနှင့် ကယ်တင်ခြင်းမည်သို့ဆက်နွယ်ပါသနည်း။
(၁) ကျေးဇူးတရားသည် လူတို့အား ကယ်တင်ခြင်းတရားကို ယူဆောင်ချပေးပါသည်။ တိ ၂း၁၁။
(၂) ကိုယ်ကျင့်တရားမပါဘဲ ကျေးဇူးတရားတော်သက်သက်ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကယ်တင်ခြင်း သို့ရောက်ရပါသည်။ ဧ၊ ၂း၈-၉။ ရော ၄း၎-၅။
(၃) ကျေးဇူးတရားသည် ဖြောင့်မတ်ရာ၌ တည်စေခြင်းကို ဖြစ်စေသည်။ ဂလ၊ ၂း၁၆။ ရော ၃း၂၄။ သန့်ရှင်းရာ၌တည်စေခြင်းကို ဖြစ်စေသည်။ ဂလ၊ ၄း၂-၃။
(ဂ) ကျေးဇူးတရားသည် ခရစ်ယာန်အသက်တာနှင့်မည်သို့သက်ဆိုင်သနည်း။
(၁) ခရစ်တော်၌ လွတ်မြောက်ခြင်းကိုဖြစ်စေလျက် ဘုရားသခင်၏ အိမ်တော်မိသားစုတွင် သားအရာကို ပေးပါသည်။ ဂလ ၄း၅-၃၁။
(၂) ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကတိထားတော်မူသော ၀ိညာဉ်တော်ကို ရရှိစေပါသည်။ ဂလ ၃း၂၂။
(၃) ၀ိညာဉ်တော်နှင့် ပြည့်ဝသော အသက်တာကို ရရှိစေပါသည်။
ဂလ ၅း၅၊ ၂၂။ ထိုနည်းအားဖြင့် ဇာတိပကတိအသွေးအသား၏ အလိုကိုအနိုင်ရယူစေပါသည်။ ဂလ ၅း၁၆။
(၄) ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သော အရာအားလုံးပြည့်စုံလုံလောက်စေသည်။
၂ကော ၁၂း၉။ ဟေ ၄း၁၆။ ၂ကော ၉း၈။
(ဃ) ပညတ်တရားနှင့် ကျေးဇူးတရား(သို့) ယုံကြည်ခြင်းတရားနှင့် အကျင့်တရားတို့သည် ရောနှောနေနိုင်ပါ သလော။
(၁) ကယ်တင်ခြင်းတရား၌လည်းကောင်း၊ ခရစ်ယာန်အသက်တာ၌လည်းကောင်း၊ ထိုတရားနှစ်ပါး တို့သည် ဆီနှင့်ရေကဲ့သို့လည်းကောင်း အလင်းနှင့် အမှောင်ကဲ့သို့လည်းကောင်းဖြစ်လျက်၊ ဘယ်သောအခါမျှ မရောစပ်နိုင်ပါ။
(၂) ဤအကြောင်းကိုဖော်ပြရန် အောက်ပါကျမ်းပိုဒ် (၂)ပိုဒ်ဖြင့် ပြည့်စုံနေပါမည်။
(က) ရောမ ၁၁း၅-၆။ “ယခုကာလတွင်ပင် ကျေးဇူးတော်အတိုင်းရွေးကောက်တော်မူသော အကြွင်းအကျန်ရှိသေး၏ ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ရှိလျှင် ကိုယ်ကျင့်သော အကျင့်အား ဖြင့်မရှိ၊ ရှိလျှင် ကျေးဇူးသည် ကျေးဇူးမဟုတ်၊ ကိုယ်ကျင့်သောအကျင့်အားဖြင့်ရှိလျှင် ကျေးဇူးအားဖြင့်မရှိ၊ ရှိလျှင် ကိုယ်ကျင့်သောအကျင့်သည်မဟုတ်။
(ခ) ဂလ ၅း၎။ “ပညတ်တရား (အကျင့်)အားဖြင့် ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်သမျှသော သင်တို့ သည် ခရစ်တော်နှင့်ကွာ၍ ကျေးဇူးတရား၌မတည်၊ ရွေ့လျော့ကြပြီ။
၁၀။ ပညတ်တရားနှင့် ကျေးဇူးတရားတို့၏ ခြားနားချက်အချို့
မှတ်ချက်။ ။ ထိုခြားနားချက်ကို စာရင်းပြုစုလျှင် အလွန်ရှည်လျားနေပေမည်။ သို့ပါ၍ မိမိကိုယ်ပိုင်စာ ရင်းပြုစုသင့်ပါသည်။ အောကတွင် နမူနာခေါင်းစဉ်အချို့ကို ဖော်ပြထားပါသည်။
- သိုးသည် သိုးထိန်းအတွက်အသေခံရသည်။ သိုးထိန်းသည် သိုးအတွက် အသေခံရသည်။
- သင်သည့်ကျင့်စောင့်နိုင်လျှင် ငါပြုမည်
- လုံးဝနာခံမှုလိုအပ်ပါသည်။ နာခံနိုင်ရန်တန်ခိုးပေးသည်။
- ဖြောင့်မတ်ခြင်းလိုအပ်သည် ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုပေးသည်။
- အကောင်းဆုံးလူပင်သေပြစ်ထိုက်သည်။ အပြစ်ကြီးဆုံးပင်အသက်ရှင်ရ။
- ကျိန်ခြင်းကို ဖြစ်စေသည်။ ကျိန်ခြင်းကိုဖယ်ရှာပေးသည်။
- ဖြောင့်မတ်ရာ၌တည်စေခြင်း၊ နှစ်မျိုးလုံးကိုပေးသည်။
- သန့်ရှင်းရာ၌တည်စေခြင်း၊ လုံးဝမရှိပါ။ နှစ်မျိုးလုံးကိုပေးသည်။
- သေဒဏ်ပေးသောအလုပ်ကိုလုပ်သည်။ အပြစ်လွှတ်ခြင်းအလုပ်ကိုလုပ်သည်။
- ကျွန်ပြုသည် လူလွတ်ဖြစ်စေသည်။
- မောရှေနှင့် အကျင့်တရားသို့ ဆက်စပ်ပေးသည်။ ခရစ်တော်နှင့် ယုံကြည်ခြင်း တရားသို့ဆက်စပ်ပေး သည်။
- မည်သည့်အရာကိုမျှစုံလင်ခြင်းကိုမဖြစ်စေနိုင်။ ခရစ်တော်၌ လူတိုင်းစုံလင်ခြင်းသို့ရောက်စေသည်။
- မည်သူ့ကိုမျှ ဖြောင့်မတ်ခြင်းမပေး။ ယုံကြည်သူတိုင်းကို ဖြောင့်မတ်စေသည်။
- သင်မပြုရဟုတားမြစ်သည်။ မည်သူမဆို လာလိုသူတိုင်းဟုခေါ်ပါသည်။
၁၁။ နိဂုံး။ လူမည်သည်ကား ပညတ်တရား၏ အကျင့်မရှိဘဲယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဖြောင့်မတ်ရာသို့ ရောက်တတ်သည်” ရော ၃း၂၈။ ဟုပေါလုနှင့်အတူဆိုရပါမည်။ ဘုရားသခင်သည် မိမိချစ်ခြင်းမေတ္တာတော်နှင့် ကျေးဇူးတရားတောကန့်လန့်ကာဖွင့်လျက် ဤလောကဇာတ်ခုံပေါ်တွင် ခရစ်တော်တည်းဟူသော ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် ဖြင့် လျှောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ထိုသူအားဖြင့် ပညတ်တရားကို စောင့်ရှောက်၍ပေါ်လွင်စေပြီး ထိုပညတ်တရားကို ပင် ရုပ်သိမ်းပြီးဖြစ်ပါသည်။ အသစ်သောကာလ၊ ကျေးဇူးတော်ကာလကို ခေါ်ဆော်လာပြီဖြစ်ပါသည်။ ခရစ်တော် သည်ပညတ်တရား၏ ကျိန်ခြင်းကိုသင့်ကိုယ်စားခံခဲ့ပြီးအပြစ်၏အခကိုလည်း အကျေပေးချေပြီးဖြစ်ပါသည်။ ဆောင်ရွက်ပြီးသော အမှုကိုယုံကြည်စိတ်ချလျက် ပြီးပြည့်စုံသောကယ်တင်ခြင်း၌ ၀မ်းမြောက်နေပါ။
၁။ ဤသင်ခန်းစာ၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်သည် မည်သို့နည်း။
၂။ ယုံကြည်ခြင်းတရားနှင့် အကျင့်တရားတို့၏ ရပ်တည်ချက်နှင့် ရည်ရွယ်ချက်တို့ကို ကောင်းစွာ သိရှိနားလည် ရန်အဘယ့်ကြောင့် အလွန်ရေးကြီးပါသနည်း။
၃။ ယာကုပ် ၂း၁၄-၂၆၊ တွင် ယာကုပ်သည် မည်သို့သွန်သင်သည်ဟု ထင်မြင်ရပါသနည်း။
၄။ ရော ၄း၂-၅။ ၈း၁။ ဧ ၂း၈-၉။ တိ ၃း၅-၆ တို့တွင် ပေါလုသည် မည်ကဲ့သို့ သွန်သင်သည်ဟု ထင်မြင်ရပါ သနည်း။
၅။ ပေါလုနှင့် ယာကုပ်တို့နှစ်ဦးသဘောကွဲလွဲသည်ဟုထင်ရသောအကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းနိုင် ရန် မည်သည့်အချက် (၃)ချက်ကိုနားလည်ရန်လိုအပ်ပါသနည်း။
၆။ ပေါလုနှင့် ယာကုပ်တို့သည် ထိုစာများကို ရေးစဉ်တွင် သူတို့၏စိတ်နှလုံးထဲ၌မည်သည့်အရာများကို ရည်ရွယ်နေပါသနည်း။
၇။ ပေါလုသည်ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ရန်မလိုဟု ဆန့်ကျင်ပါသလော။ မဟုတ်လျင်သက်သေပြပါ။
၈။ အကျင့်နှင့် ပတ်သက်၍ ပေါလု၏အမြင်သည် ယာကုပ်၏ရှုဒေါင့်နှင့် မည်သို့ကွာခြားပါသနည်း။
၉။ ပေါလုက ငါတို့သည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သာဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်ရသည်ဟု ဆိုသည်။ ယာကုပ် ကယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သာဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်ရသည်မဟုတ်။. အကျင့်အားဖြင့်ရောက်ရသည်ဟု ဆို၏ထိုသူနှစ်ဦးတို့၏ စိတ်ထဲတွင် ရည်ညွှန်းထားသော အမြင်နှစ်မျိုးကိုဖော်ပြလျက် ထိုအမြင်တို့ကိုစေ့ စပ်ပေးပါ။
၁၀။ ကယ်တင်ခြင်းနှင့် အကျင့်တရားတုိ့၏ စပ်ဆိုင်မှုကိုဖော်ပြသောကျမ်းချက်အနည်းဆုံး (၄)ချက်ကို ဖော်ပြ ပါ။
၁၁။ ကယ်တင်ခြင်းနှင့် ယုံကြည်ခြင်းတရားတို့၏ စပ်ဆိုင်မှုကိုဖော်ပြသောကျမ်းချက် (၄)ချက်ကိုဖော်ပြပါ။
၁၂။ အကျင့်တရားသည် ခရစ်ယာန်အသက်တာတွင် မည်ကဲ့သို့အရေးကြီးပါသနည်း။
၁၃။ ယုံကြည်ခြင်းသည် ခရစ်ယာန်အသက်တာတွင်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ကြောင်း၊ ပေါ်လွင်စေသော ယုံကြည် ခြင်းတရားကြောင့် ပေါ်ပေါက်ရသောအချက် (၅)ချက်ကိုဖော်ပြပါ။
၁၄။ ဂလ ၅း၁-၄တွင် ပေါလုက ယုဒလူတို့ကျင့်သုံးသော အရေဖျားလှီးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ငြင်းချက် (၃)ချက်ကိုထုတ်ထားပါသည်။ ထိုအချက်များကို ဖော်ပြပါ။
၁၅။ “သင်တို့သည် ကျေးဇူးတရားမှ ရွှေ့လျော့ကြပြီ”ဟုဆိုရာတွင် မည်သို့ဆိုလိုပါသနည်း။
၁၆။ ဘုရားသခင်ကမောရှေအားပေးထားသောပညတ်တရားနှင့် ပတ်သက်၍-
(က) ပညတ်တရား၏ရည်ရွယ်ချက် (၃)ချက်ကိုဖော်ပြပါ။
(ခ) ပညတ်တရား၏အားနည်းချက်များကား ဘယ်အရာများနည်း။ (၄)ချက်ကိုဖော်ပြပါ။
၁၇။ ယုံကြည်သူသည် ပညတ်တရားနှင့် မည်သို့ပတ်သက်ပါသနည်း။ ပညတ်တရားအပေါ် မည်သို့ သဘောထားရမည်နည်း။ အချက် (၄)ချက်ကိုဖော်ပြပါ။
၁၈။ ကျေးဇူးတရားကိုအခြေခံပုံသေယုံကြည်ချက် Doctrine အဖြစ်စာဖြင့် ရေးသားပါ။ ခေတ်ကာလကြီး ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းဖော်ပြပါ။
၁၉။ ကျေးဇူးတရားသည် အောက်ပါအချက်များနှင့် မည်ကဲ့သို့ပတ်သက်ဆက်စပ်ကြောင်းကို ကျမ်းညွှန်းဖြင့် ပြပါ။
(က) ကယ်တင်ခြင်း (၁)
(ခ) ခရစ်ယာန်အသက်တာ (၁)
၂၀။ ယုံကြည်ခြင်းတရားနှင့် အကျင့်တရားသော်လည်းကောင်း၊ ပညတ်တရားနှင့် ကျေးဇူးတရားသော်လည်း ကောင်း ခရစ်ယာန်အသက်ရှင်မှုတွင်ဖြစ်စေ၊ ကယ်တင်ခြင်းလမ်းကြောင်းတွင်ဖြစ်စေ ရောနှော၍မရ ကြောင်းကိုဖော်ပြသောကျမ်းညွှန်းကြီး (၂)ချက်ကိုဖော်ပြပါ။
၂၁။ ပညတ်တရားနှင့် ကျေးဇူးတရားတို့၏ ခြားနားချက်များကို အချက် (၆)ချက်ဖြင့် စာရင်းပြုစုပါ။
အမည်၊ --------------------------------------------- ရက်စွဲ။ ----------------------------